Maverick Management Co. Ltd. - Home | Facebook
See more of Maverick Management Co. Ltd. on Facebook
8,241 people follow this
628, Damaryone St, Hlaing Township
+959250 026 292
Contact Maverick Management Co. Ltd. on Messenger
Professional Service · Marketing Consultant
Chewy Junior Myanmar
Property Advertisement in Yangon
Professional Services in Yangon
PlacesYangonMarketing ConsultantMaverick Management Co. Ltd.
Experienced Professional & Efficient Marketing Company
Maverick Management Co. Ltd. added6new photos.
🏁 အတိုးမဲ့ ၃ နှစ်ခွဲ အရစ်ကျဖြင့် ပေးချေနိုင်မည့် 🏁
🏬 RIVER FRONT GARDEN 🏬
💰အငှားအာမခံဖြင့် ရောင်းချပေးပါမည်။ 💰
🏩 🏨River Front Garden 🏩 🏨 ကွန်ဒိုအခန်းများသည်
🏯 စကာင်္ပူlife style ကိုခံစားနိုင်စေမဲ့ရန်ကုန်မြို့၏
💰1sqft... မြန်မာငွေကျပ် ၁သိန်း၉သောင်းကျပ်မှ စတင်၍ ရောင်းချပေးသွားပါမည် 💰
🔹Facilities. 📌Swimming Pool ၊ GYM ၊ Multi Purpose Hall ၊ BBQ Area ၊Playground ၊ Supermarket ၊ Coffee Shop ၊ Cinema ၊ Function Room ၊ KTV ၊ River Taxi , etc,... များရှိမည်ဖြစ်သည်။
🔸2019 တွင် စတင်နေထိုင်နိုင်ပါပြီ။
River Front Garden ၏ floor plan နဲ့ Payment Plan များ အသေးစိတ်သိလိုပါက
chat box (သို့) ☎ 09794888280（wai phyo）
Maverick Management Co. Ltd. added5new photos.
· November 19 at 2:18am ·
- ၁၂၇, ခ/၁၁ လမ်း, အင်းစိန်မြို့နယ် ( မြို့သစ်ဈေး မှတ်တိုင်)
- ၆၀' X ၇၀' ( ၄၂၀၀ sq.ft )
- ၄ထပ် RC လုံးချင်း
-2HP air-con.. ၇ လုံး...
- 1.5 HP air-con.. ၁ လုံး
-6master bedroom.
- စတိုခန်း.. ၁ ခန်း
- ပြင်ဆင်ပြီး နေထိုင်ရန် အသင့်
- နိုင်ငံခြားသားများ မိသားစုလိုက်နေထိုင်ရန် သင့်တော်
- စည်ကားပြီး ပြီးပြည့်စုံသော နေရာတစ်ခု
- ဆက်သွယ်ရန်.. Ko Ko Khine @ vinxint
- ph no. 09970330468
Maverick Management Co. Ltd. added7new photos.
· November 17 at 2:01am ·
🌲 🌲..FOREST CITY... 🌲 🌲
👉 ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး Carbondioxide ကင်းစင်မြို့လေးဖြစ်လာမဲ့ Forest City သစ်တောမြို့သစ်စီမံကိန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ
Malaysia နဲ့ Singapore ကြား ဧက( ၅၀၀၀) နီးပါးရှိသော...
ှိကျွန်းလေးကျွန်းပေါ်ဘိုးဘွားပိုင်မြေ တွင် စိမ်းလန်းစိုပြေ သော သစ်တောမြို့တော်ပုံစံ တည်ဆောက်ထားပြီး ဘယ်နေရာမှမရနိုင်တဲ့ စိမ်းလန်းစိုပြေတဲ့ ရှု့ခင်းတေကိုအိမ်မှာနေရင်း ခံစားနိုင်မဲ့ အပြင် မြေအောက်မှာပဲကားလမ်းများကိုဖောက်ထားပြီးမြေပြင်ပေါ်မှာကားမသွားရတဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးမြေအောက်ကားလမ်းမြို့တော်လည်း
🌲Forest City 🌲 မှာ အပန်းဖြေနားခိုနိုင်မဲ့ နေရာတွေ ၊ ကော်ဖီဆိုင်တွေ၊ ပန်းခြံတွေ၊ ဟိုတယ်တွေ ၊ Office tower နဲ့ international School
တည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တေကို တစ်နေရာထဲမှာရနိုင်မဲ့
🌲 Forest City 🌲သစ်တော မြို့တော်လေးမှာ နေနိုင်ဖို့အတွက် ပွဲချိန်အတွက်လာရောက်လေ့လာဝယ်ယူဖို့ ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် 👍 👍
ပွဲကျင်းပမည့်နေရာ - Meeting Room(B),
ကျင်းပမည့်အချိန် - 1:00 Pm to 5pm
Details Contact- 09 966273573
Maverick Management Co. Ltd. shared William Ye Thet's post.
· November 15 at 3:40am ·
William Ye Thet added3new photos.
· November 15 at 2:42am · Yangon, Myanmar ·
( ၁မိနစ်သာ ဖတ်ရန် ) ​​​ကမ္ဘာမှာ ​ရောမြန်​မာမှာ ​ရော အိမ်​ယာစီမံကိန်း Project ​တွေအများကြီး ရှိတယ်​...တချို့ Project ​တွေ ​အောင်​မြင်​တယ်​..လူကြိုက်​များတယ်​ Hot... ဖြစ်​လာတယ်​..တချို့ Project ​တွေကျရှုံး ကုန်​တယ်​.​ရောင်းမထွက်​ဘူး.အ​ဆောက်​ဦးသာပြီးသွားတယ်​ ဘာမှဖြစ်​မလာဘူး...​အောင်​မြင်​ပြီး ပြီးပြည့်​စုံတဲ့ အိမ်​ရာစီမံကိန်းဆိုတာ အချက်​ကြီး ၃ချက်​​ပေါ်မူတည်​​နေတယ်​...(၁) လူတစ်​​ယောက်​ရဲ့ ​နေ့စဉ်​ဘ၀လိုအပ်​ချက်​ ကိုတ​နေရာတည်းမှာဖြည့်​ဆည်း​ပေးနိုင်​ပြီလား....ဆိုလိုတာ က ​နေရာ ​ကောင်းမှမဟုတ်​ဘူး ဟိုးမြို့ စွန်​မြို့ဖျားမှာရှိ​နေဦး​တော့ အဲဒီစီမံကိန်းမှာ ​နေထိုင်​မယ့်သူ​တွေက စီးပွား​ရေး ပညာ​ရေး ကျန်းမာ​ရေး လူမှု​ရေး ​​ဖျော်​​ဖြေ​ရေး အစစအရာရာသာရှိ​နေရင်​ မြို့ စွန်​ မကလို့ ​တောထဲပဲ ​ရောက်​​နေပါ​စေ တခြားတ​နေရာကို ​တောင်းတ​နေစရာမလိုဘူး...အရာအားလုံး ဟာ တစ်​​နေရာတည်းမှာရှိ​နေဖို့လိုတယ်​ အဲလိုမှ မဟုတ်​ပဲ အရမ်း​ကောင်းတဲ့ကွန်​ဒိုအထပ်​၅၀ကြီး မြို့ ပြင်​မှာ ထီးထီးကြီး​ဆောက်​ထားလို့ တခြားစီးပွား​ရေး ပညာ​ရေး ကျန်းမာ​ရေး လူမှု​ရေး ​ဖျော်​​ဖြေ​ရေး လိုအပ်​ချက်​​တွေမရှိရင်​ ကျရှုံးမှာပဲ...
(၂) အိမ်​ရာစီမံကိန်း Project တစ်​ခု ​အောင်​မြင်​ဖို့ ဆိုတာ ပတ်​၀န်းကျင်​ကို​ပြောင်းလဲနိုင်​စွမ်းရှိရပါမယ်​...ဥပမာ ဒီProject ကြီးပြီးသွားရင်​ လမ်း​တွေ လည်း​ကောင်းလာ မယ်​ အလုပ်​ကိုင်​ခွင့်​လမ်း​တွေတိုးလာမယ်​ ပတ်​၀န်းကျင်​ လူ​နေမှူအဆင့်​တန်းမြင့်​လာမယ်​ စသဖြင့်​ ​ပြောင်းလဲနိုင်​စွမ်းရှိရင်​ ​အဲဒီ Project ဟာအောင်​မြင်​ဖို့ လူကြိုက်​များဖို့ ဖြစ်​လာပါမယ်​..
(၃) အိမ်​ရာစီမံကိန်း Project တစ်​ခု ​အောင်​မြင်​ဖို့ ဆိုတာ ​၀ယ်​ယူမယ့့်​ ​နေထိုင်​မယ့်လူ​တွေ ရဲ့ ယုံကြည်ချက်​ ခံယူချက်​​တွေကို တည်​မြဲလာ​အောင်​ ​ရေရှည်​ သက်​သေပြနိုင်​ဖို့ လိုအပ်​ပါတယ်​...ဥပမာ ​မ​ဆောက်​လုပ်​ခင်​​ပြောထားတာကတမျိုး ​ဆောက်​လုပ်​ပြီးဖြစ်​လာတာကတမျိုး ၃နှစ်​အတွင်းပြီးမယ်​ ​ပြောပြီး ​ဆောက်​လုပ်​မှုကြန့်ကြာ​နေတာ​တွေ အ​ပြောနဲ့အလုပ်​မညီတာ​တွေ စိတ်​ကူးနဲ့လက်​​တွေ့ ကွာခြားတာ​တွေ ပိုက်​ဆံရပြီး​ရော ​နောက်​ပိုင်း​ရေရှည်​ကို လှည့်​မကြည့်​တာ​တွေ လုံခြုံမှု သန့်​ရှင်းမှု ၀န်​​ဆောင်​မှု မွန်းမံပြင်​ဆင်​မှု တာဝန်​ယူမှု တာဝန်​ခံမှု စတာ​တွေ ကိုသက်​​သေပြနိုင်​ဖို့ လိုအပ်​ပါတယ်​...ဒါမှ သာ တကယ့်​အောင်​မြင်​တဲ့ ​နေရာ တစ်​ခု အသိုက်​အ၀န်းတစ်​ခု စီမံကိန်းတစ်​ခု အစစ်​မှန်​တစ်​ခု ဖြစ်​​ပေါ်လာမှာဖြစ်​ပါတယ်​...ကျ​နော်​တို့ နိုင်​ငံက လူအများစုဟာ အထက်​ပါ ​ကောင်းမွန်​ စစ်​မှန်​တဲ့ လူ​နေမှူ ဘ၀ပုံစံနဲ့ တစ်​ခုကို လူနည်းစု သာသိမြင်​ခံစား​နေကြရ​သေးပါတယ်​...တကယ်​ စစ်​မှန်​တဲ့ အိမ်​ရာစီမံကိန်းဆိုတာ ဟာ Forest City မှာ ရရှိနိုင်​တာ ​ကြောင့်သစ်​​တောမြို့ ​တော်​ ကို မိမိတို့ ကျန်​ရှိ​နေတဲ့ ရှင်​သန်​ချိန်​​တွေ မှာ ခံစားမှူအသစ်​​တွေရရှိနိုင်​ဖို့ လက်​မလွှတ်​တမ်း ​လေ့လာဝယ်​ယူသင့်​​ကြောင်း အကြံ​ပေးတင်​ပြအပ်​ ပါတယ်​ခင်​ဗျာ....
William Ye thet
Maverick Management Co. Ltd. added 11 new photos.
· November 14 at 2:54am ·
Dubai ထိသွားစရာမလို 🚷 မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ အနီးဆုံးမှာ
ဒူဘိုင်းစတိုင် လူတွေ ဖန်တီးတဲ့ ကျွန်းအသစ် 🗾
ဝယ်ယူနေထိုင်လို့ရနေပီနော်.. 👍 👍
Forest Cityကို Malaysia နိုင်ငံနှင့် Singaporeနိုင်ငံကြား တည်ဆောက်ထားပါတယ်...
Maverick Management Co. Ltd.
· November 12 at 11:36pm ·
ရန်ကုန်တိုင်း l မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်. ရတနာသိင်္ဂီဈေးအနီးရှိ တိုက်ခန်းသစ်ရောင်းမည်..
1026sqft နှင့် 2052sqftအကျယ်အဝန်းများရရှိနိုင်
l ဓာတ်လှေကား(card system)ပါဝင်
backgenerator ပါဝင် l
မီးကြိုးသွယ်တန်းမှုနှင့်ရေပိုက်လိုင်းများ နံရံမြုပ်စနစ် l
ရေချိုးခန်းများကို နံရံပါတ်လည် ကြွေပြားကပ်ပေးမည် l
24 hour securityနှင် cctv systemပါမည် ..
ဈေးနှုန်း.. 1200 L, 1250 L, 1300 L, 1400 L, 2500 L, 2900 L, GROUND FLOOR 3200L
penth house 3000L
အသေးစိတ်သိလိုသူများ.. messenger (or) phone.
.09794888280(wai phyo)သို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်...
Maverick Management Co. Ltd. shared The Standard Time Daily's video.
· November 8 at 9:35pm ·
Posted by The Standard Time Daily
· November7at 5:00am ·
အခန်းတန်ဖိုးရဲ့ (၅)ရာခိုင်နှုန်းသာ လက်ငင်းပေးချေရန်လိုတဲ့ 28 Chidlom (ချစ့်လွန်)ဘန်ကောက် အိမ်ရာပြပွဲ ရန်ကုန်မှာ ပြုလုပ်မယ်
ကိုယ်တိုင်နေထိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်...၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု တစ်ခု အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ချို့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ အိမ်ရာတိုက်ခန်းတွေ ဝယ်ယူလာကြပါတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံတွေအထဲမှာမှ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ သွားလာရလွယ်ကူပြီး မြန်မာလူမျိုးအများစု ဆေးသွားကုတာ၊ ဈေးဝယ်ထွက်တာတွေအတွက် သွားလာမှု များတဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဘန်ကောက်မြို့က ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေကို မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ စိတ်ဝင်စားမှု ပိုမိုများပြားပါတယ်။
ဘန်ကောက်မြို့မှာ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းဝယ်ယူလိုတဲ့ သူတွေအတွက် လက်ငင်း အနေနဲ့ အခန်းတန်ဖိုးရဲ့ (၅)ရာခိုင်နှုန်းကိုသာ ပေးချေးပြီး ဝယ်ယူနိုင်မယ့် 28 Chidlom ဘန်ကောက်အိမ်ရာပြပွဲကို ရန်ကုန်မြို့၊ နိုဗိုတယ် ဟိုတယ် ပုဂံခန်းမမှာ နိုဝင်ဘာလ (၁၁)ရက်နဲ့ (၁၂)ရက် နေ့လည် (၁၂)နာရီကနေ ညနေ (၆)နာရီအထိ နှစ်ရက်တိုင်တိုင် ကျင်းပသွားမယ်လို့ ပြပွဲကို ဦးစီးကျင်းပမယ့် SQFT Global Properties က သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျော်ကျော်က ရိုက်ကူးထားပါတယ်။
· November7at 9:53pm ·
"လက်ငင်း ၅ ရာခိုင်နှုန်းသာ ပေးချေရန်လိုသော ဘန်ကောက်မြို့လယ်ရှိ 28 Chidlom အဆင့်မြင့်အိမ်ရာ အရောင်းပြပွဲ"
🇹🇭 ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ 28 Chidlom အဆင့်မြင့်အိမ်ရာစီမံကိန်းမှ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများကို လက်ငင်း ၅ ရာခိုင်နှုန်း ပေးချေရုံဖြင့် ဝယ်ယူရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်မည့် အခွင့်အရေးကို ယူဆောင်လာမည့် ဘန်ကောက်အိမ်ရာပြပွဲကျင်းပသွားတော့မှာပါ။ 🎉 🎉
“28 Chidlom အဆင့်မြင့်အိမ်ရာအရောင်းပြပွဲ” ကို ဘာကြောင့် လာရောက် ရွေးချယ်ဝယ်သင့်လဲဆိုတာ သင်သိပါသလား ❓
🍁 28 Chidlom အိမ်ရာစီမံကိန်းမှာ ဘန်ကောက်မြို့သို့ ဈေးဝယ်ထွက်သည့် မြန်မာလူမျိုးများ သွားလာမှုများသည့် Platinum ဈေးဝယ်စင်တာ၊ Palladium ဈေးဝယ်စင်တာ တို့နှင့် ၉၀၀ မီတာအကွာ၊ Central World ဈေးဝယ်စင်တာနှင့် ၇၅၀ မီတာအကွာ၊ Central Embassy ဈေးဝယ်စင်တာနှင့် ၅၀၀ မီတာအကွာတွင် တည်ရှိခြင်း
🍁 အဓိက ကောင်းကင်ရထား ဘူတာရုံဖြစ်သည့် Chidlom ဘူတာရုံနှင့်လည်း ၂၅၀ မီတာသာ ကွာဝေးသည်။ 28 Chidlom အနီးတွင် မြန်မာလူမျိုးများ ဆေးကုသမှုများသည့် ဘွန်ရမ်ဂရက်ဆေးရုံ၊ ချူလာလောင်ကွန်း တက္ကသိုလ်၊ Siam Paragon ဈေးဝယ် စင်တာတို့လည်း တည်ရှိခြင်း
🍁 လက်ငင်းငွေပေးချေမှု အနေဖြင့် (၅)ရာခိုင်နှုန်းသာ ပေးချေရမည်ဖြစ်ပြီး (၆)လအတွင်း နောက်ထပ် (၅)ရာခိုင်နှုန်း၊ (၁)နှစ်အတွင်း နောက်ထပ် (၅)ရာခိုင်နှုန်း ပေးချေရခြင်း
🍁 ဘန်ကောက်မြို့လယ် ဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ်တွင်တည်ရှိနေခြင်း
စတဲ့ အကောင်းတကာ့ အကောင်းဆုံးအချက်များနှင့် ပြည့်စုံနေတဲ့ 28 Chidlom အဆင့်မြင့်အိမ်ရာကို မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီး ဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်လို့ ပြပွဲသို့ မဖြစ်မနေလာရောက်ကျဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ 🏃 🏃
ပြပွဲနေ့ရက် - (၁၁) ရက်နေ့မှ (၁၂) ရက်နေ့ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၇ အထိ
ပြပွဲအချိန် - နေ့လည် (၁၂) နာရီမှ ညနေ (၆) နာရီအထိ
ပြပွဲနေရာ - Bagan Room, Level -4, No-459, Novotel Hotel, Yangon
အသေးစိတ် စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက -
ဖုန်းနံပါတ် 09794888280 သို့ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး
messenger မှတဆင့်လည်း ပွဲတက်ရောက်ရန်
wphyo7374@gmail.com သို့ E-mail ဖြင့်လည်း စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
🎉 လက်မလွှတ်သင့်သည် အခွင့်အရေးအား ယူဆောင်လာမည့် “28 Chidlom အဆင့်မြင့်အိမ်ရာအရောင်းပြပွဲ” သို့ လာရောက်ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ 🎉
ယင်းကွန်ဒိုကို Wong Tung & Partners (International) နှင့် Amenity Design (Myanmar) မှဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးပြီး Marga Landmark Development မှဆောက်လုပ်ထားကြောင်းသိရသည်။
၈.၇ ဧက ကျယ်ဝန်းသော မြေ ပေါ် တွင်4 Resdience Towers နှင့် 1 offlice Tower စုစုပေါင်း တာဝါ(၅) လုံး ကိုဆောက်လုပ်မည် ဖြစ်သည်။
Tower တစ်ခုလျှင် ပျမ်းမျှ (၂၇)ထပ် မြင့်၍ တစ်လွှာတွင် (၅) ခန်း မှ (၇) ခန်းထိရှိနိုင်ကြောင်းသိရသည်။
Tower တစ်ခုလျှင် ဓာတ်လှေခါး (၃)စီး စီပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
Phase 1 တွင် penthouse 10 ခန်းပါဝင်မည်ဟုသိရသည်။
အိပ်ခန်း(၁)ခန်းပါဝင်သော စတုရန်းပေ (၆၆၉) to (၈၆၉) အထိကျယ်ဝန်းသောအခန်းနှင့် အိပ်ခန်း(၄)ခန်းပါဝင်သော စတုရန်းပေ (၂၅၅၈) to (၃၀၃၁) အထိကျယ်ဝန်းသောအခန်းဟူ၍အခန်းအမျိုးအစား(၂)မျိုးရှိသည်။
Large outdoor swimming pool and children’s pool,Indoor golf simulator driving range,
Fully-equipped business Centre,Professional meeting and function rooms,
Children’s playroom,Classic Billilards room,Relaxing spa and sauma facilities,
Modern gymnasium with state of the art equipment,Standard yoga and dance room,Comprehensive Library,Full Wi-Fi access,Grand Reception Hall စသည်. Facilities များပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက..ဖုန်း. 09794888280(wai phyo)သို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်
Posted by Maverick Management Co. Ltd.
Maverick Management Co. Ltd. added 17 new photos.
· October 28 at 1:44pm ·
*** AYAR CHANTHA EXECUTIVE CONDOMINIUM ***
တစ်လုံးတစ်ခဲတည်း ငွေပေးချေစရာမလို လစဉ်(ကျပ် ၁၅ သိန်း)မှစတင်ပေးသွင်းရုံ ဖြင့် သင့်မိသားစုဝင်များအားစိတ်ပူပင်သောကများစေသော နေရာများမှ ဖယ်ခွါ၍၊ ပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ရက်များဖြင့် အပန်းဖြေ အနားယူရင်း 🏖 🏖 🏖
သင့်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာများဖြင့်ပေါင်းစပ်လိုက်တော့ ❤️ 💚 💜
🏠HOME SWEET HOME လေးရှိမည့်နေရာ 💙
Maverick Management Co. Ltd. added 14 new photos.
· October 28 at 1:08am ·
'' THE CENTRAL ''
Tower အသစ် ထပ်မံအရောင်းဖွင့်လစ်ရောင်းချ
🇲🇲 Location - ရန်ကုန်မြို့ ၏ဒုတိယအစည်ကားဆုံး...
· October 27 at 3:43am ·
🏢 SPRING LINE Condominium 🏢
🌲 Hlaing River Landmark 🌲
Modern Complex Business Center
✅ အောင်ဇေယျတံတား၏ အရှေ့ဘက် လှိုင်မြစ်ကမ်းနှင့် အနီးဆုံးတွင် တည်ရှိပြီး ရန်ကုန်မြို့တော်၏ အထင်ကရ အဆောက်အဦး (Landmark) တစ်ခု အဖြစ် ရည်ရွယ်၍ တည်ဆောက်ထားပါတယ်..
✅ စကာင်္ပူနိုင်ငံရှိ KTD Design Company မှ Design ရေးဆွဲထားပြီး (၂၄) ထပ်အဆောက်အဦး(၄)လုံးနှင့် (၁၇)ထပ်အဆောက်အဦး (၁)လုံးတို့ကို တည်ဆောက်ထားပြီး အဆင့်မြင့် SOHO လူနေအိမ်ခန်းများ၊ ရုံးခန်းများ နှင့် ဟိုတယ်များ ပါဝင်မည်။
✅ Spring Line Condominium ကို SOHO
Business Center တစ်ခုအဖြစ် တည်ဆောက်ထားတဲ့အတွက် ရုံးခန်းအတွက်လည်း ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်..
✅ ကွန်ဒို အဆောက်အဦးတွင် Shopping Mall
ရုံးခန်းများ၊ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ ဟော်တယ်
SOHO အိမ်ခန်းများ၊ ရေကူးကန်၊ ပန်းခြံများ
စသည်ဖြင့် Facility အပြည့် ခေတ်မီလှပ
✅ အောင်ဇေယျကြိုးတံတား အရှေ့ဘက်ခြမ်း
လှိုင်မြစ်နှင့် ကပ်လျှက် တည်ဆောက်ထား
သောကြောင့် လှိုင်မြစ်ရဲ့ တမူထူးခြားသော
✅ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်
နီးပြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ်နှင့် ဧရာဝတီတိုင်း
ဘက်မှ လာလျှင်လည်း လေးဆိပ်သို့ သွားရာ
Main လမ်းမကြီး ပေါ်တွင် တည်ရှိသောေ
ကြာင့် သွားလာရေး လွယ်ကူစေပါတယ်...
✅ ရန်ကုန်မြို့တွင်ရှိသည့် % နှုန်း နည်းသော
ထာဝရ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရသော မြေအမျိုးအစား
ဖြစ်သည့် Free Hold Land မြေအမျိုး
အစားဖြစ်၍ သားစဉ်မြေးဆက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်
✅5နှစ်အရစ်ကျ ငွေပေးချေမှု စနစ်ဖြစ်
✅ 50% ( 1years ) + 50% (4years )
✅ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးလုနီးသော Spring Line
✅ ၂၀၁၈ - ၉ လပိုင်းတွင် အခန်းအားလုံးကို
ပြင်ဆင်မှု အပြီး အပ်ပါမည်။
✅ ဝယ်ယူ ရရှိနိုင်သော အခန်း အကျယ်နှင့်
✅ ဒုတိယထပ်မှ ဆယ်လွှာအထိ
1 Sq ft - 184 $ to 212 $
၁၂ လွှာ မှ အထပ် ၂၀ အထိ
1 Sqft - 209 $ to 228 $
အထပ် ၂၀ မှ ၂၄ ထပ်အထိ
1 Sq ft- 228 $ to 244 $
✅ A1-2bedroom
Size :886 Sq ft
✅ A-2bedroom
✅ B- 2bedroom
Size : 874 Sq ft
✅ C- 3bedroom
Size : 1432 Sq ft
✅ D- 3bedroom
Size : 1430 Sq ft
✅ E-3bedroom
Size : 1538 Sq ft-
✅ E1- 3bedroom
Size : 1539 Sq ft
အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက...
message box (or)
အောက်ဖော်ပြပါ ဖုန်းနံပါတ်များကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
..09 966899432 / 09784677065(Yan Lin)
• Viber & Chat Box
· October 26 at 1:56am ·
Highlight Urban Lifestyle
KanBae Tower 🗼
# located on the KanBae Station Road,
Near KanBae Road( ThitSar Road) and
Moe Kaung Pagoda ...
# 60 year grant land
#4blocks in total, sales open3blocks
# A block - 25 floors,7units
# C block - 25 floors,6units
# E block - 25 floors,4units
# MMK 200,000/- to 250,000/- per sq.ft
# at lease 700 sq.ft and up to 1100 sq.ft
# have2bedrooms and3bedrooms
# including interior decorations,water
cleansing system, exhaust fan,fire alarm,
wi-fi access, mechanical car park, retail
shops, gym, swimming pool, video analog
#4types of main entrance lock systems
...finger print, key, password, digital card
# more details,contact me.
Ko Ko Khine @ Vinxint
ph no. 09970330468
Maverick Management Co. Ltd. added2new photos.
· October 25 at 11:27pm ·
Superior and Luxurious Office Apartments
KanTharYar Centre ( for lease )
- Corner of KanYeikThar Road and
U Aung Myat Road
- Size 1200 sq.ft to 2013 sq.ft...
- USD 5$ per sq.ft
- 8 office in each floor, 23 floors in total
- Still possible for whole floor big office rental
- 1 car parking per office
- Promotion period during 2017
For rental with full advance payment
rental 1 yr + free4mths
rental2yr + free 1 yr
rental3yr + free2yr
- Detail and further informations,
contact me, Ko Ko Khine @ Vinxint
· October 25 at 10:16pm ·
For Rent : High Standard Office Building
Crystal Tower @ Pyay Road
- Central air-con system ...
- Private pantry and phone line
- Close to banks, Junction Square,
Hledan Centre and midtown areas
- USD 3.8$ per sq.ft ,estimate 1065 sq.ft
- Can be negotiate and for more information
- Fb acc: Vinxint Franklyn @Ko Ko Khine
- Ph no. +959970330468
Another condominiums and apartments can also be available.